Vaviri vemuZimbabwe voendesa SA kumatare - The Zimbabwean
Vaviri vemuZimbabwe voendesa SA kumatare
Makore matanhatu vaviri ava vapunyuka mumhosva mbiri dzavaipomerwa dzekuponda nekupamba, vapoteri Memory Njani na Sidanisile Ngwenya vari kuendesa hurumende yeSouth Africa kumatare edzimhosva nemhosva yekuvasunga zvisiri pamutemo nekuvabata senhapwa.
Vaviri ava vakasungwa zvisina tsananguro uye zvisiri pamutemo musi wa9 Chikumi 2005 vakazoregedzwa pamhosva dzavaipomerwa mushure megore sezvo dare redzimhosva kuWestgate rakashaya humbowo hwemhosva dzavo. Vaviri ava vaipomherwa mhosva yekutapa nekuponda Lungile Moyo webato reMDC, uyo ane mutumbi wakaonekwa wakatsva zvikuru munzvimbo inoyevedza nekuzororera vanhu yeJohannesburg muna 2005.
Achitaura nemutapi wenhau wepepanhau reZimbabwean, Njani akarondedzera achiratidza kutsutsumwa mabatirwo akaipa aaiitwa nematikitivha ekuSouth Africa mushure mekusungwa kwake.
“Muupenyu hwangu handisati ndambotapa kana kuuraya munhu. Dare redzimhosva rakandiwana ndisina mhosva, asi iye zvino ndave kuda matikitivha eInterpol kuti achiongorora nyaya iyi sezvo mapurisa ekuSouth Africa akundikana kubata ny’any’a dzakapara mhosva iyi,” akadaro Njani.
Njani akati kugara kwaakaita mutirongo kwakamushungu-rudza zvikuru.
Anoti akarasikirwa nenguva yaaifanira kuwana rubatsiro maringe nezvidzidzo zvake uye zvinonzi imba yake yakapiswa nehama dzevashakabvu ava.
Akagara gore nemwedzi inoraudzira mutorongo apo mhosva yaaaipomerwa yaiongororwa mumatare uye akakumbira magweta kuti vamubatsire “kuendesa kumatare hurumende yeSouth Africa kuti indiripe mari inosvika mamiriyoni gumi nematanhatu pakundirwadzisa kwese kwayakaita.”